Miyuu dhammaaday Khilaafkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada? - BBC News Somali
Image caption Madaxweyne Farmaajo oo Baydhabo kula kulmay qaar kamid ah madaxda maamulada dalka
"Waxaa loo shaqeeyaa shacabka Soomaaliyeed, waxaa dowladda goboleedyada iyo dowladda federaalka ka dhaxeeya waa in shacabka ay aniga i wakiisheen, aniga aan wakiishay dowladda goboleedyada oo howshii la dedejiyay". Ayuu yiri madaxweyne Farmajo.
Mas'uuliyiinta Maamul goboleedka Jubaland ayaa dabyaaqada sannadkii tegay ka soo horjeestay hadalkii ka soo yeeray guddiga aqalka sare ee loo xil saaray xallinta khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kuwaasi oo ku dhawaaqay in la soo afjaray khilaafka.
Tabashooyinka ay qabaan qaar kamid ah maamul goboleedyada:
Image caption Madaxweyne Farmaajo oo la fadhiya Axmed Madoobe
Image caption Madaxweynaha Jubaland
Magaalada Bu'aale ee xarunta gobolka Jubada Dhexe oo ah magaalo madaxda maamulka Jubaland ayay wararku sheegayaan inay tahay ujeedada ugu weyn ee loo qaadayo howgalka.
''Waa waajib ciidan oo na saaran, gaar ahaan qeybta 43-aad oo aaggaasi ku beegan in aan sameyno howlgal lagu xoreynayo gobolka Jubbada Dhexe''.Sidaasi waxaa yiri Janaraal Bogmadow oo ah taliyaha qeybta 43-aad ee miltaeriga Dowladda Federaalka.